उम्मेदवार छनोटमा कमजोरी भएकै हो : प्रदीप पौडेल | Samaj Khabar
० स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
– केही ठाउँमा परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको छ । हामीले जित्ने सुनिश्चित भएको भनिएका केही ठाउँमा परिणाम त्यसअनुसार आएको छैन । जनताले दिएको म्याण्डेटलाई स्वीकार गर्नु त छँदै छ । तर हाम्रोतर्फबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन । चुनावी परिणामबारे समीक्षा गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ ।
० परिणाम अनपेक्षित आयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
– एकदमै धेरै अनपेक्षित भयो भनेर त म भन्दिनँ, तर केही ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ । हिजो हामीले संसदीय चुनाव र संविधानसभामा जितेका ठाउँहरूमा हाम्रो पक्षमा परिणाम आएको देखिँदैन । त्यसैले केही कुरामा हामीले गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
० कांग्रेसले सोचे जस्तो परिणाम नआउनुको कारण के हो ? कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
– यसमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय पनि केही छ । दोस्रो कुरा, तालमेल गर्दा पनि अभ्यास नभएको हो । माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्दा कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको छ । मतदानमा हामीले राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्न सकेनौं । पछिल्लो पटक राजनीतिक घटनाक्रमको जसरी विकास भयो, त्यसमा कांग्रेसले आफ्ना दृष्टिकोण जे जसरी ढंगले राख्यो, त्यसबारेमा विवेकशील मतदाताहरूले अलि बढी समीक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ ।
० कांग्रेसको बलियो भनिएको र ठूला सहरमा समेत यसपटक कांग्रेस कमजोर देखियो, जस्तो काठमाडौं, पोखरा, बनेपामा ?
– गएको संविधानसभामा हामीले काठमाडौंमा सात सिट जितेका थियौं । त्यसैले यसपटक काठमाडौंका जनताले हामीलाई समर्थन गर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । काठमाडौं अलि विवेकशील मतदाता भएको ठाउँ पनि हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेसको प्रस्तुति जस्तो भयो, त्यसमा काठमाडौंका मतदातामा केही असन्तुष्टि देखिएको हो कि ? यो एउटा सन्दर्भ हो । दोस्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेकको हो कि ?
तर अहिले पूरै परिणाम आएको छैन । यहाँ डेढ लाखको हाराहारीमा मत खसेको छ । त्यसैले अहिले नै यस्तै हुन्छ भनिहाल्न सकिने स्थिति छैन, तर परिणाम प्रतिकूल आयो भने हामीले यी विषयमा समीक्षा गर्नुु जरुरी छ ।
० पार्टीभित्र पनि कमीकमजारी रह्यो भन्नु भयो, नेतृत्व तहमै देखिएको हो ?
– सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त नेतृत्व नै हुन्छ । राजनीतिक घटनाक्रमबारे कांग्रेसको अवधारणा निर्माण गर्ने काम पनि नेतृत्व तहको नै हो । घटनाक्रमको विकास यसरी अगाडि बढ्यो, त्यसबारेमा कांग्रेसको धारणा बनाउने काम नेतृत्वकै हो । यसमा नेतृत्वको मात्र कुरा हुन्न, आन्तरिक व्यवस्थापन र अन्य विषयहरू पनि जोडिन्छन् ।
० जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेस कमजोर भएको, तर गाउँमा बलियो देखियो, यसको कारण के हो ?
– मध्यमवर्गीय समुदाय जो सहर केन्द्रित छन्, सहर उन्मुख बसोबास गर्ने जनताको बीचमा कांग्रेसले यसअघि आफ्नो लोकप्रियता हासिल गर्दै आएको थियो । केही वर्ग अथवा समुदायको समर्थनमा कांग्रेस सधंै अग्रस्थानमा थियो । यसपटक तपाईले संकेत गर्न खोजेको केही ठाउँमा विभिन्न समस्या देखिए । विवेकशील मतदाताहरू पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हामीसँग अलि असन्तुष्ट भएका हुन् कि भनेर अनुमान गर्ने एउटा स्थिति पनि छ । यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
० स्थानीय चुनावको यस परिणामले प्रदेश सभा अथवा संसदीय चुनावमा पनि असर गर्छ कि गर्दैन ?
– बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव भएको हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । त्यसैले पहिलो चरणको निर्वाचनले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि केही प्रभाव पार्न सक्छ । यसैगरी, प्रदेश सभा र संसदीय चुनावमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । यद्यपि संविधान संशोधनबारे हामीले आफ्ना धारणा जसरी राख्यौं, यसबारेमा सहरी क्षेत्रमा राम्ररी बुझाउन सकेनौं कि ? मिडियामा त्यो कुरालाई हाम्रो तर्फबाट राम्ररी लैजान सकेनौं कि भन्ने एउटा विषय छ । हामीले नेपाल जोड्न खाजेका हौं । सबै समुदयालाई एकै ठाउँमा राख्न खोज्ने, सबैको बारेमा वकालत गर्न खोज्ने, तर उल्टै राष्ट्रघाती भनेर हामीमाथि नै आरोप लाग्ने ? विखण्डन र अतिवादको कुरा गर्नेहरूले नै बढी प्रश्रय पाउने, यसबारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको संशोधन प्रस्ताव संविधान कार्यान्वनयको निम्ति हो । संशोधन प्रस्तावभित्र राष्ट्रघात भएकै छैन । यसले नेपालमा मधेस, हिमाल र पहाडलाई जोड्ने काम गर्छ । यसले मधेसमा उपेक्षित रहेका जनताको हकअधिकारको बारेमा वकालत गरेको छ । मधेसी जनता देशभन्दा बाहिरका होइनन् । उनीहरू पनि नेपालकै हुन् । यो कुरा हामीले राम्ररी बुझाउन नसकेका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा कांग्रेसले आमजनतासमक्ष आफ्नो तर्फबाट बुझाउन नसकेको देखिएको छ । जनतालाई सही सन्देश प्रभावित गर्ने काममा हाम्रो पार्टी नेतृत्वले सकेको देखिएन । यी सबै विषयमा हामीले समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
० माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलले कांग्रेसलाई कति फाइदा ग-यो ?
– सरसर्ती हेर्दा माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलले कांग्रेसलाई फाइदा भएको देखिन्न । तीनवटा प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा तालमेलका कारण धेरै ठाउँमा परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन । यसबारेमा अहिले नै समीक्षा गर्ने स्थितिमा म छैन । सबै परिणाम आइसकेको छैन । कति ठाउँमा तालमेल भयो, यसबारे म आफू पनि पूरै जानकार छैन । समग्र विषयमा समीक्षा गर्न बाँकी छ ।
० कांग्रेससँगको तालमेलबाट माओवादीले कति पाइदा लियो ?
– तालमेल गर्दा बढी भोट भएको पक्षले प्रमुख पद प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, तर कतिपय ठाउँमा बढी भोट भएर पनि प्रमख पद नपाएका कारण हाम्रा कार्यकर्ता बढी असन्तुष्ट भएका हुन् जस्तो देखिन्छ । तालेमल गरिसकेपछि लेनदेन हुन्छ नै । तालमेलबाट फाइदा दुवै पक्षलाई हुनुपर्छ । तालमेलबाट कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनी कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्ने गरी हामीले तालमेल गरेनौं । हामै्र कार्यकर्ता तालमेलबाट बढी उत्साहित हुन सकेनन् । तालमेललाई सार्थक कारण हामीले दिन सकेनौं । कांग्रेसले निश्चित रूपले जित्ने ठाउँमा प्रमुख पदमा दोस्रो पक्षलाई दिने गरी तालमेल गरेकामा कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुने गरी हामीले तालमेल गर्न सकेनौं ।
आगामी दिनमा तालमेल गर्दा कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुने गरी गर्न आवश्यक छ । तालमेल अस्वाभाविक छ, यो वैचारिक पक्षबाट पनि तालमेल गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । । किनकि यो त स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यो कानुन, ऐन निर्माण गर्ने तहको निर्वाचन होइन । बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहको निर्वाचन हो यो । बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न तालमेल गर्दा सजिलो हुन्छ । त्यसैले तालमेलको विपक्षमा म छैन । तर पार्टीका कार्यकर्तालाई तालमेल गर्न आवश्यक छ र तालमेल हैसियतअनुसार भइरहेको छ भन्ने कुराको महसुस भयो भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ र त्यो परिणाममुखी हुन्छ ।
० उम्मेदवार छनोटमा पार्टीबाट केही कमीकमजोरी भएको हो ?
– यसबारेमा पनि कति प्रतिशत कमीकमजोरी भएको छ, म भन्न सक्दिनँ । तर, पनि कमीकमजोरी पक्कै भएको छ ।
० संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी थियो, तर यसपटकको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस दोस्रो पार्टी हुने स्थिति देखियो नि ?
– कांग्रेस र एमालेबीच अन्तर धेरै फराकिलो त छैन, तर यो स्वाभाविक होइन । किनभने कांग्रेस पहिलो पार्टीकै रूपमा थियो । कांग्रेसको गढमा अरु पार्टी आउनु पक्कै पनि कांग्रेसका लागि स्वाभाविक होइन । त्यसैले त्यस्तो किन भयो भनेर हामीले समीक्षा गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक रूपमा समीक्षा गरेर केही कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । हामीले सही नै गरेका रहेछांै भने पनि त्यसलाई जनतासमक्ष लैजान सकेका रहेनछौं कि । कहीँ कतै त्रुटि भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
० दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस कसरी जान्छ ?
– अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया जसरी अघि बढ्यो, त्यो कांग्रेसको समन्वयका कारणले हो । कांग्रेस एकतर्फी रूपमा खाली आफ्नो अडानलाई कायम गरेर बसिरहेको भए आज स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैनथ्यो । निर्वाचनमा एमालेले अग्रता स्थान हासिल ग¥यो होला, तर निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा उसको कुनै भूमिका छैन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा पहिलो अवसर केपी ओलीजीले पाउनु भएको थियो, तर उहाँको पालामा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको भए आज यो चुनाव हुँदैनथ्यो । यो निश्चित हो । केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ समीकरण भयो । त्यो समीकरणले निर्वाचनको मिति मात्र तोकेन, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन्छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने काममा एमालेको कुनै भूमिका देखिन्न । बरु उल्टो उसको गैरजिम्मेवार भूमिका नै देखिन्छ । तर कांग्रेसले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ । हाम्रो लागि मुख्य कुरा प्रक्रिया हो । प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा हामी पछाडि परांैला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर हाम्रो लागि आफू पछाडि परेर पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले हाम्रो भूमिकाले संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण भइरहेको छ ।
अब दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ । त्यो निर्वाचनमा हामीले आफ्ना विषय राख्छौं । संविधानप्रति हामी इमान्दार छौं । संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं । हामी कुनै पनि अडान लिएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न चाहन्नांै । हामी सबै पक्षको कुरा सुनेर सबै पक्षबीच सहमति गरेर अघि बढ्न चाहन्छौ ।
मुख्य र मौलिक विषयलाई परिर्वतन नगरीकन अरु सहायक विषयलाई परिवर्तन गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले संशोधनको प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याएका हौं । यो कुरा हामीले जनतासमक्ष लैजानु पर्छ । अहिले अलि समय बाँकी छ । समय कम भएकाले पहिलो चरणको चुनाव भएको प्रदेशमा जनतालाई यो कुरा बुझाउन सकेनौं । अब बाँकी रहेको समयलाई प्रयोग गरेर हामीले वास्तविक कुरा जनतालाई बुझाउन सक्यौं भने दोस्रो चरणको चुनावमा अहिले जुन खालको अन्तर देखिएको छ, पहिलो स्थानमा पुग्न हामीले थोरै संख्या बढाउनुपर्ने भएको छ, त्यसलाई हामी ‘मेन्टेन’ गर्न सक्छौ । त्यो क्षतिपूर्ति गर्न सक्छांै भन्ने मलाई लागेको छ ।
० दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसको स्थिति कस्तो रहला ?
– हामीले गर्दै गरेको काम अथवा कांग्रेसको जे धारणा हो, जनतालाई बुझाउन हामीसँग अलि समय छ । पहिलो चरणको चुनावको कमीकमजोरी के भयो, त्यसको समीक्षा गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने समय पनि हामीसँग छ । त्यो समयलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा भएको क्षतिलाई सजिलैसँग पूर्ति गर्न सक्छांै ।
० दोस्रो चरणको चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ला त ?
– दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ । यो निश्चित छ । समग्रमा पनि कांग्रेस नै ठूलो दल हुन्छ ।